Lawyer Agency of Taylor Swift and Gong Yoo
Taylor Swift နဲ့ Gong Yoo တို့ရဲ့ တွေ့ဆုံမှုအကြောင်း အေဂျင်စီဖက်က ရှင်းလင်းပြောကြား
ကိုရီးယားမင်းသားချော Gong Yoo နဲ့ ဂီတကြယ်ပွင့် Taylor Swift တို့က New York မြို့မှာ ညစာအတူတူစားပြီး တွေ့ဆုံခဲ့ကြတယ်လို့ သတင်းတွေထွက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ ဒီသတင်းကြောင့် Taylor ရဲ့ သီချင်းမှာ Gong Yoo က ပါဝင်ရိုက်ကူးတော့မလားဆိုပြီး ပရိသတ်အများအပြားက ခန့်မှန်းပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီသတင်းထွက်ပြီးမကြာသေးချိန်မှာပဲ နိုဝင်ဘာ (၂၆) ရက်နေ့မှာပဲ Gong Yoo ရဲ့ အေဂျင်စီဟာ တရားဝင်စာ ထုတ်ပြန်ကြေညာပြီး Taylor Swift နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့သတင်းကို ငြင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။ အေဂျင်စီဖြစ်တဲ့ Management Soop “မင်းသား Gong Yoo ဟာ မကြာသေးခင်က New York ကို သွားရောက်ထားတာမျိုး မရှိသေးပါဘူး” ဆိုပြီး MK Sports ဖက်ကို သတင်းဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
ကောလဟာလတွေစတင် ပြန့်လာခဲ့တာကတော့ social media မှာ ဖွခဲ့ရာက စတင်ပါတယ်။ အကောင့်တစ်ခုက Gong Yoo ဟာ Taylor Swift ရဲ့ “Wildest Dreams” MV မှာ ပါဝင်ဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ရင်း တွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပြီး ၂ ဦးသားက လွန်စွာသက်တောင့်သက်သာဖြစ်ကာ ရင်းနှီးနေပုံရတယ်လို့ တင်ခဲ့တာပါ။ ဒုတိယ‌တစ်ယောက်ကတော့ Gong Yoo ဟာ Taylor နဲ့တွေ့ဆုံစားသောက်စဉ်က ‘Goblin’ ထဲကလို လည်ပတ်ပုဝါ အနီကိုတောင် ပတ်ထားတယ်လို့ ကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ခဲ့ရသလိုမျိုး ရေးတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကနေစတင်ခဲ့တဲ့ ကောလဟာလတွေကြောင့် Gong Yoo ရဲ့ အေဂျင်စီက ဝင်ထိန်းရတဲ့အထိ ဖြစ်လာပြီး Gong Yoo ဟာ ဘယ်မှမသွားဘဲ တောင်ကိုရီးယားမှာပဲ ရှိနေခဲ့ကြောင်း၊ Netflix series ဖြစ်တဲ့ ‘The Silent Sea’ အတွက် ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ပြောဆိုခဲ့ရပါတော့တယ်။
ဒီသတင်းကိုကြားပြီး netizens များကတော့ “ဘယ်သူကများ ဒီလို ပေါက်ကရသတင်းတွေ လျှောက်ဖွလိုက်တာပါလိမ့်နော်? lol”, “အတန်းရှင်းလိုချင်လို့ သတင်းမှားတွေ လျှောက်လွှင့်နေတာ”, “စိတ်မကောင်းပေမဲ့ တကယ်ဖြစ်‌စေချင်တာ”, “Gong Yoo ကို Taylor Swift ရဲ့ သီချင်းထဲမှာ ပါစေချင်တာနော်”? “သတင်းမှားတင်တဲ့ကောင်က တော်တော်စိတ်ကူးကောင်းတာပဲ…lol” စသဖြင့် ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ တကယ်မဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့ ခဏတာလေးဖြစ်ဖြစ်တော့ Taylor နဲ့ Gong Yoo တို့ ဆုံစည်းကြလေမလားဆိုပြီး ကျေနပ်ခဲ့ရပါသေးတယ်။
Next 2021 နိုဝင်ဘာလအထိ စစ်တမ်းအရ လက်ရှိဝင်ငွေအမြင့်ဆုံးနာမည်ကြီး ထိုင်း BL စုံတွဲ (၅) တွဲ »
Previous « တကိုယ်တော်ရှေ့ဆက်ဖို့ ကြိုးစားနေဆဲဖြစ်တဲ့ Mik နဲ့ အချစ်သစ်စတင်ဖို့ ပြင်ဆင်နေတဲ့ Bow
ကမ္ဘာ​ပေါ်မှာ BTS အဖွဲ့ တစ်ခုတည်းကသာ ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ World Record များ
အဖွဲ့ဝင်ညီမ (၃) ယောက်ရဲ့ အပီအပြင်အားပေးနေမှုကို ကြည်နူးနေတဲ့ မင်းသမီးလေး Jisoo
မူလတန်းတုန်းက အင်္ဂလိပ်နာမည်‌ကို ပြောပြခဲ့ပြီးနောက် ချစ်စနိုးနဲ့ စခံနေရတဲ့ Yang Yang